Iwe uchiri kunetseka nezve kusawana chaiyo yekucheka muchina? Muna Chivabvu gore rino, yedu jiahao kambani yakagadzira nyowani peturu yekucheka muchina, iyo ine yakasarudzika yemazuva ano dhizaini dhizaini, iyo inogona kukanganisa chiratidzo chako. JH350 peturu disc Cutter inocheka kongiri, Dombo, zvidhinha, uye kugadzira, Iine ...
Na3: 30pm muna Nyamavhuvhu 7, 2020, kambani yedu yakaita musangano mukuru wechigadzirwa pakati peYongkang dzimbahwe. Mabhizimusi kubva kuindasitiri ye Hardware akakokwa kuti vapinde musangano uyu. Pasi pegadziriro yedu yokungwarira, kambani yedu yakaratidza JH-168A 2200W kuputsa kwemagetsi ...
Gumiguru 20th, Yongkang michina uye Hardware Expo yakaitirwa muYongkang International Convention uye Exhibition Center. The pashoo ainyanya akaratidza Hardware uye michini indasitiri. Kuburikidza neratidziro iyi, kambani yedu yakaratidza zvigadzirwa zvedu kune vatengi, uye kuburikidza nepamhepo kutaurirana, isu tinoshanda ...